ကိုရီးယားနိုင်ငံနံပါတ်(၁)ရင်သား ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလှပ စေသော ခရလ်
ရင်သားသေးနေလား?ပြားနေလား?မညီညာဘူးလား?ပန်းဆီရောင်သန်းသော ရင်သားပိုင်ရှင်ဖြစ်ချင်လား?သဘာဝအတိုင်းရင်သားကို လှပစေ ချင်လား?Viva မှ ကူညီပါ့မယ်.....
Call - 09 799265690
Sold By - LOTAYA
Categories: Beauty Popular Products
1. ခွဲစိတ်ဖို့ မလိုဘဲ ရင်သား ကြီးထွားလာနိုင်ခြင်း
2. နှိပ်နယ်မှု လုပ်ရခြင်းကြောင့် သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းခြင်းကြောင့် ကျန်းမားရေးအတွက်လည်းကောင်းပြီး ရင်သားကင်ဆာကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း
3. ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ရရှိလာသော ကြီးထွားမှု ဖြစ်လို့ ပိုမို ကျေနပ် နှစ်သက်ရခြင်း
4.Viva Cream ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲ လှပလုံးဝန်းကြီးထွားတင်းရင်းတဲ့ရင်သားတစ်စုံကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်.
သုံးစွဲဖူးသူCustomerတွေရဲ့ feedback ပေါင်း 22000ကျော်ကိုလဲပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင် US,UK, ကနေဒါ, ဂျာမနီ, သြစတျေးယျ , နယူးဇီလန်,ဟောင်ကောင်, စကာင်္ပူ ,ထိုင်း အစရှိတဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၂၂နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်။
> ကိုရီးယား နိုင်ငံ နှင့် မြန်မာ နိုင်ငံမှ FDA ထောက်ခံချက်ရရှိပြီးဖြစ်လို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ် ။
1)မနက်/ည တနေ့ကို ၂ကြိမ် ရင်သား၂ဖက်ပေါ်ကို သင့်တင့်တဲ့ဆေးပမာဏထားပြီး လိမ်းပေးပါ
2)စုပ်ယူမှုအားပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ရေချိုးပြီးတဲ့အချိန်လိမ်းတာပိုကောင်းပါတယ် ရေမချိုးဖြစ်ဖူးဆိုရင်တောင် ရေ၀တ်လေးနဲ့ရင်ဘတ်ကိုသုတ်ပြီးမှ ဆေးလိမ်းပေးပါ
3)ဆေးစိမ့်ဝင်မှုအားကောင်းပြီးပိုပြီး အာနိသင်ထိရောက်မှုရှိအောင်လို့ ၅မိနစ် ၁၀မိနစ်လောက် ရင်သားလိုင်းအတွင်းထဲမှ အပြင်ဘက်သို့ ဆွဲယူပြီး နှိပ်နယ်ပေးပါ ရင်သားအောက်ခြေမှ အပေါ်သို့ပင်တင်သလိုမျိုးလေးဖြစ်အောင်နှိပ်နယ်ပေးပါ ဆေးစိမ့်ဝင်သွားပြီဆိုမှ ဘော်လီထပ်ဝတ်ပေးပါ။
4)ဂျိုင်းအောက်ကနေရင်အုံ ပင့်တင်ပြီးစက်ဝိုင်းပုံ ၁၅မိနစ် နှိပ်နယ်လိမ်းပေးပါ
သင့်​​ကောက်​​ကြောင်း​လေး အထင်းသား ​ပေါ်လွင်​​စေဖို့ ရင်​သားကလဲပံ့ပို့​ပေးပါတယ်။
ရင်​သားတဖက်​နဲ့တဖက်​ မညီညာလို့ ​လျော့တွဲကျလို့ပဲဖြစ်​ဖြစ်​
မိန်းက​လေးအများစုဟာ ရင်​သားနဲ့ ပတ်​သက်​ပီး စိုးရိမ်​ပူပန်​မှု​တွေရှိတတ်​ကျပါတယ်​။
ဒါ​တွေကိုကူညီ​ဖြေရှင်း​ပေးမဲ့ side effect ကင်းကင်းနဲ့ရင်​သားကိုအမှန်​တကယ်​ကြီးထွားလာ​စေနိုင်​တဲ့ 100%Korea made viva breast cream​လေးရှိ​နေပါပီ အဆီ​တွေဂလင်း​တွေ တွယ်​ဆက်​တစ်​ရှူး​တွေနဲ့ပဲ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရင်​သားမှာ ကြွက်​သားမရှိတဲ့အတွက်​ ​လေ့ကျင့်​ခန်းလုပ်​မယ်​ဆိုရင်​​တောင်​ တင်​သား​တွေလိုမျိုး ကြီးထွားလာ​စေနိုင်​ဖို့ခက်​ပါတယ်​ ဘာ​ဆေးပဲလိမ်းလိမ်း မသိသာဘူး ထူးခြားမှုမရှိဘူးဆိုတာ​တွေလဲ ရှိတတ်ကျပါတယ်
ဗီဗာက​တော့ စတင်​​ရောင်းချခဲ့တဲ့ 2008ခုနှစ်​ကစပီး ၁၀နှစ်​ဆက်​တိုက်​ အမျိုးသမီး​တွေက​ရွေးချယ်​​ပေးတဲ့ အ​ကောင်းဆုံး breast cream brand ဆုကိုရရှိထားတဲ့အပြင်​ အခုချိန်​ထိ ကိုရီးယားမှာ လူကြိုက်​အများဆုံး အ​ရောင်းရဆုံး best seller no.1 breast cream ✨အဖြစ်​ ရပ်​တည်​​နေပါတယ်။
​ ==>သုံးစွဲဖူးသူအမျိုးသမီးထုရဲ့ review​ပေါင်း22000​ကျော်​ကိုလဲ ပိုင်​ဆိုင်​ထားတဲ့အပြင်​ ကိုရီးယားနိုင်​ငံတွင်​သာမက US, UK, Australia, Asia အပါအ၀င်​ နိုင်​ငံ​ပေါင်း22နိုင်​ငံသို့လဲ တင်​ပို့​ရောင်းချလျက်​ရှိပါတယ်​ ခွဲစိတ်​စရာမလိုပဲ သင့်​ရင်​သားကို အမှန်​တကယ်​ ကြီးထွားလာ​စေနိုင်တဲ့ ရင်​သားကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလိမ်း​ဆေးဖြစ်​ပါတယ်​။​
ဗီဗာခရလ်မှာအဓိက ပါဝင်​တဲ့ volufilineဆိုတာက​တော့ ကြွက်​သားတင်းရင်း​​စေတဲ့ သဘာဝအရ​ပေါင်းစပ်​ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်​ပီး လိုအပ်​တဲ့အဆီပမာဏကိုဖြည့်​ဆည်း​ပေးပါတယ်​။ ဓာတ်​ခွဲခန်း ​လေ့လာမှုအရ volufiline သည်​တ​နေ့ကို ၂ကြိမ်​ ၂လ​လောက်​လိမ်းရုံဖြင့်​ အဆီ​မော်​လီကျူးများ ၆၄၀ ရာခိုင်​နှုံး တိုးပွား​စေပါတယ်​။
ဗီဗာခရလ်ဟာ သဘာဝအတိုင်း ရင်​သားကို ကြီး ထွားလှပ​စေပီး ရင်​သားဆဲလ်​များကိုလဲ တိုးပွား​အောင်​ ကူညီ​ပေးနိုင်​ပါတယ်​။ Hormonal side effect မရှိတဲ့အပြင်​ လိမ်းလိုက်​ရင်​လဲ ပူခြင်းစပ်​ခြင်း မရှိပဲ အနံ့သင်းသင်း​လေးနဲ့ ရင်​သားကြီးထွား​စေရုံသာမက ရင်​သားတ၀ိုက်​က အသားရည်​ကို ပါ ဖြူ​ ​ဖွေးနူးညံ့လှပလာ​အောင်​ပြု ပြင်​​ပေးပါတယ်
most popular products made in Korea ORDER 09 7992 65690
The Face Shop Beauty Tools...
MADE IN KOREA For all skin types Size: 30ml Green tea seeds meet "Innisfree's Seed Biotechnology" to make amazing changes in skin Call us...
Innisfree Whitening Pore...
MADE IN KOREA For all skin types Size: 150ml Essential skin that cleans skin tone, dark spots, skin texture and reveals clear, radiant...